Izindaba - IZINHLOBONO EZIKHULU ZEMIKHIQIZO YEGALIKI, NJENGOBA KUNCONYWA NGABALIMI BASEKHAYA, MANJE SEKUTHOLAKALA KAKHULU KWI-AGR FARM STOCKS
I-AGR Garlic Farm, eyenziwe yaduma ngezincomo ezivela kubathengi bendawo, ibilokhu ikhula ugarliki ezweni iminyaka. Ibhizinisi lokuvuna lidala imikhiqizo eminingi efakwe ugarlic kusuka kugalikhi omusha kuya kumpuphu wegalikhi.
Uchwepheshe we-AGR Garlic, iMenenja uWendy Chen, uyajabula ukuthi iGarlic Farm ivumile ukuthi isitokwe imikhiqizo yabo. UWendy uthe, “Imikhiqizo ye-AGR Garlic Farm ihlukile enyakatho neChina. Akekho omunye onikezela ngemikhiqizo ehlukahlukene enjalo. Ngaphambi kokuthi sikwazi ukumemezela ukufika kwesitoko emakethe yendawo, cishe sesithengise ngakho konke esinakho esitokweni. Impendulo imikhiqizo eye yaba nayo kumakhasimende ethu avamile ibimangalisa. Ngingancoma impela ugalikhi omusha. ”
Imikhiqizo ye-AGR Garlic Farm efakiwe ifaka ama-fresh bulbs, izinhlobonhlobo zokugqokwa kukagalikhi, i-garlic powder, i-garlic granules, namafutha kagalikhi.
UCrisp Xu, onguMqondisi futhi ongumsunguli we-AGR Garlic Farm, uthe, “Ngesikhathi abanye abalimi bendawo beza kithi bezobheka ukuthi bangayithumela yini imikhiqizo yabo emazweni angaphandle sajabula ukuthi sikwazi ukusiza.
“Asinagalikhi omningi kakhulu wemikhiqizo yethu esitokweni futhi kuyasijabulisa ukuzwa ukuthi amakhasimende aphesheya kwezilwandle athokozela ibanga elikhona. Siyinqwaba yamahektare abathengisi abathengisa izinto kwamanye amazwe abanesifiso sokuvikela isithunzi sethu, ukusebenza nezindawo zasemakhaya kuhambisana ngokuphelele nemikhuba yethu yebhizinisi. ”
Uma ungathanda ukuthola imininingwane eminingi nge-AGR Garlic Farm nohlu lwayo lwemikhiqizo sicela uvakashele iwebhusayithi: www.tokyo-fuuzoku.infookuyiwa.com. Imikhiqizo yeGarlic Farm itholakala kuphela esitokisini esilungele ukuthengiswa futhi ithunyelwe eminyango yakho neqembu lethu lokuthengisa elihle kakhulu okwamanje.
Enhliziyweni ka-AGR Garlic ukuzibophezela kwendlela yokuphila ephilayo. I-AGR Garlic Farm izisebenzele yona futhi iyiqiniso ukuthi 'iyinsimu yokufaka ipuleti' esebenza ngezinga eliphakeme lokusimama. Isebenzisa imikhuba yokulima esimeme kunazo zonke i-AGR iyaziqhenya ngokunambitha imikhiqizo yama-apula amasha evela emaphandleni akudala ase-Asia. Ibhizinisi lezolimo eliphilayo lidlulela emapulazini amabili futhi selikhule lacishe laba yizinkulungwane zamahektare. Ijinja ye-organic, ama-apula, u-anyanisi nogalikhi ngenkathi isizini, kukhuliswa emapulazini. I-AGR Farm igcina imikhiqizo yasemaphandleni ehlukahluka kakhulu kusuka kubahlinzeki bendawo kuya kwamanye amazwe.
Uhla olubanzi lwemikhiqizo ye-AGR Garlic Farm efanekiselwa manje isiyatholakala ku- www.bazinmeh.com.